Siyazi ukuba ubusika bunjani xa ubushushu ngaphandle kwefestile buphantsi kweqondo lokushisa. Umkhuhlane kunye nokubanda kudlulileyo ngaphezu kweenyanga ezi-7 ngonyaka. Akubanda nje ngenxa yobanda, ngenxa yokushisa okuphantsi, kodwa ngenxa yokuba umoya oqhaqhaqhaqhazelayo kwisitalato. Abantu abaninzi benza impazamo yokusebenzisa igama elithi "ubulili". Kwaye amantombazana, ezama ukujonga i-sexy, agqoke izinto ezinzulu kwaye azalise umzimba wawo. Kodwa kulo busika aluhambelani. Ubushushu beza bexolela amahlombe e-epaji evulekileyo, amanxeba angenalutho, iipketi ze-mini, kufuneka uzifake. Kuhle kangakanani ukugqoka ngexesha lebusika? Kufuneka ugcine imigaqo ethile ukuba ubukeke buhle kwaye buhle ebusika.
Kuhle kangakanani ukugqoka ebusika?
Sisafuna ukudukisa nokuguqula iintloko. Ndifuna ukuzivelela ngamehlo kwaye ndihambe phantsi kwitaladi, ndibethe izithende zam, ndiphose iingqungquthela ngaphantsi kwesitya sebusika. Ukufumana ukuhambelana phakathi komfanekiso kunye neempahla, kufuneka ufanise umbala weengubo. Ebusika, umzobo kufuneka ufihliwe kwaye ngexesha elifanayo uhlale ngesondo. Ebusika, kwangoko kwangoko ukuphosa iimpahla zangaphandle, zihlahla iigebengu, iingubo zeegusha, iingubo kunye neengubo zoboya.
Ziyinto elula kakhulu, kodwa wena ungakhetha ukhetho olufanelekileyo. Into eyona nto yayiyinkosa eyiyo kunye nesitayela esifanelekileyo.
Ngokwalo, iingubo zoboya ngenxa yobumnandi sele sele zesondo. Akuyena wonke umntu oya kukwazi ukuwufumana, kuba yinto ebiza kakhulu. Ukukhetha ingubo yoboya, kufuneka uqaphele amaqhosha amahle, kumgca oqokelelweyo, konke oku kunika i-coat coat sophistication. Khangela imizekelo emide okanye imfutshane, musa ukulibala malunga nezixhobo zokusebenza. Ukongeza kwengubo, izicathulo ezintle, iiglavu kunye neengqungquthela zidibaniswe ngokupheleleyo.
Kodwa ukuba uchitha ixesha elininzi kwizithuthi zikawonkewonke, kweso sixeko, akunakwenzeka ukuba iingubo zoboya ziya kuhambelana nawe. Iifuru zilungile ukuba kufuneka uphume ekukhanyeni, kwaye uhlambulule imihla ngemihla uza kuyidinga ibhatyi okanye isambatho sesitayela.
Ukuba uchitha ixesha elide emotweni, ngoko kufuneka uyilibale ngesambatho eside, siya kukuyeka kwaye ukhawuleze uquke. Nayi kwindawo eya kuba yingubo emfutshane yeegusha okanye ibhatyi.
Izambatho zasebusika kufuneka zifunwe kwaye zizame. Ingubo yakho yempahla yeegusha okanye ibhatyi kufuneka ibe lula, kwaye kuzo kufuneka uzive ukhululekile. Hlola umgangatho wobomvu, i-seams, uphulaphule iimvakalelo zakho kwaye uze ukhethe iingubo ezintle, ezinokuhlala, ezikhululekile nezifudumeleyo.
Ingubo e busika
Ebusika, ungakhetha iingubo ezintle, apho uza kukhangeka kakuhle. Kodwa xa ukhetha ingubo, kufuneka uqwalasele uhlobo lomfanekiso wakho. Ubude obude bubungakanani emadolweni. Kuya kuba kuhle ukubheka ingubo kunye noboya obufakwayo. Kwaye iibhotshi nge-hairpin, i-headdress, iiglavu ziza kugxininisa kuphela ubuntu bakho.
Ebusika, unokuzihobisa ngeengubo ezimhlophe zasebusika, kwaye ngoko umgangatho wokutshatya ufinyelela kwimida ethile engacingi. Ukuba uneminyaka engama-35 ubudala, uya kukhangela iminyaka engama-25, kwiminyaka engama-55 ubudala awuyi kunikwa iingubo ezimhlophe iminyaka engaphezu kwe-30. Ngokwenza njalo, akumele ulibale ngokucacileyo ukuba uphawule amehlo akho, ngokukodwa xa ubhaqa phezu koboya obunobunxibi bengubo yakho yasebusika. Ingubo yokubusika eya kukuvumela ukuba ugxininise iifom zakho kwaye ulondoloze imfihlelo yeenkcazo. Ukuba iimali zivumela, zithengela ixabiso elibizayo neliphezulu. Gxininisa kwimilenze, kwaye oku kungenziwa ubude obufutshane, ukuvumba okanye ukunyanzelisa.
Ingubo yokubusika kuphela inokugxininisa ukugoba komzimba phantsi kwengubo efudumeleyo. Esifubeni, esongezwe ngumoya kwaye senziwe ngumbumba weboya, ekuthuthukisweni nasekufudumeni, ngenyameko wink kumfaki sicelo ngendima yomxhasi.
Ingubo yohlobo lwebusika kunye ne-fur collar
Ngengubo ene-collar yoboya, unokuvakalelwa kukuba ubuhle obubuhlungu obuya kuba bufikelele ekuhlekeleni, ukuhlambalaza kunye neengcungcuthe zeofisi, njengoko i-aura yentuthuzelo, ubuhle kunye nokuthembeka kuya kuhlala kunye nawe, nokuba iingubo zakho zihlala kwisigqoko. Emva kwakho konke, iingubo akuzona nje iimpahla zasebusika, yimeko yomphefumlo wakho.
Xa ukhetha i-wardrobe yasebusika, kufuneka ucinge ngezinto eziza kugqitywa phantsi kweengubo zakho zangaphandle. Kodwa yintoni efunekayo eyenziwe ukwenza izinto zilungele phantsi kwemozulu ebusika kwaye zikhangele i-sexy? Ingubo eboyiweyo esuka kwintsimbi eninzi okanye ijezi ingcono. Akufanele kube mfutshane. Kwaye ubuhle bemilenze bunokugxininiswa ngezicathulo kwi-hairpin. Ukongeza kwiingubo, kunconywa ukuba ugqoke i-T-shirts okanye i-sweaters eneemikhono emide. Akudingeki ukuba uqine isibalo sakho. Yaye ubulili bakho buya kugxininiswa ngengubo eqinile yomkhonto-ipensela okanye ibhulukwe. Ukongezwa okugqwesileyo kule ndawo ecaleni kwindlela yokwenza kakuhle kunye nekhanda elihle kakhulu.
Kwaye ebusika, musa ukulibala malunga nezixhobo zokusebenza. Isambatho esilula kufuneka sigxininiswe ngamacici amahle okanye ubuhlalu, okanye ubophe iqhekeza elikhanyayo entanyeni yakho. Ingqwalasela ekhethekileyo kufuneka ihlawulwe kwizicathulo, kufuneka igxininise ubuhle beenyawo zakho. Akunjalo kuphela izicathulo kwi-hairpin eziya kukwazi ukugxininisa oku. Ngoku kukho ezininzi izicathulo ezintle kunye nezicathulo ezicwangcisiweyo. Isiqinisekiso sempilo sishushu, izicathulo zomgangatho. Kulo, iinyawo zakho kufuneka ziziva zikhululekile kunoma yiphina imozulu kwaye imvula.
Nayiphi na intloko, ehambelana ngongcamango, iya kukunika umonakalo omkhulu.
Ingqungquthela kufuneka isondele kwiingubo ozigqoke ngayo, gxi ninisa umbala wesikhumba kunye nesidima sobuso. Ubusetyhini obunobunono bunconywa iinqayi kunye neendawo ezinkulu, kunye nekhwele elijongene neendawo eziza kuphakanyiswa ngokukhululekile. Ibhinqa eliphethe impumlo ephuculweyo ilungele ukuqhubela phambili. Ngubani ode, isitya esicubileyo nesibanzi siya kufumana. Isitya esikhulu siza kufana nentombazana ephantsi.
Ngoku siyazi indlela yokugqoka kakuhle ngexesha lebusika. Kwaye okubaluleke kakhulu, kule ngubo kufuneka uzive ukhululekile kwaye unomtsalane. Ukunyameka okuthe tye, ubumnandi obukhulu, ubukeka obuhle kuza kukunceda kule nto.
Imigaqo yendlela yokugqoka yoshishino
Iingcebiso ezi-4 eziphezulu malunga nendlela yokugqoka ngokufanelekileyo kubasetyhini abangaphezu kwama-30
Impahla yabasetyhini yemveliso edumile
Iilensi zoqhagamshelwano zombala, ngokutshintsha ngokupheleleyo umbala wamehlo.
Indlela yokuhlala isitayela, imfashini kwaye ibonakale
I-Adjika esuka kwi-zucchini ebusika: zokupheka ngeebhentshini ngeziteyathelo ngeyiteyathelo
Isaladi kunye ne-sprat ne-croutons
Ikhukhi ze-chocolate oatmeal
Ukongezwa kweenwele, yintoni na?
Uwuphi umehluko phakathi kothando nothando lomlutha?
Inkqubo entsha yegolide yokunciphisa imibimbi phantsi kwemehlo
Ukuhlaziywa komzimba kunye neliphulo lokuguga
Ukutya ngokulahleka kwesisindo: ukutya kwekhofi
Umdaniso wemoya - i-polka
Imihlobiso yeKrisimesi ekhaya